Bbc somali wararka caawa > ALEBIAFRICANCUISINE.COM
Posted on 28.11.2018 by Maral M.
Bbc Somali Wararkii Caawa
caawa iyo caalamka 15/05/2019 bbc Somali
Daawo: Iran oo cunaqabateynta uu Mareykanku saary ku tilmaamtay mid sharci darro ah
2017 con film battlefield 1 ps4 prezzo giochi di dolci gratis morbo di cushing cane alimentazione
Account Options Sign in. Top Charts. New Releases. Add to Wishlist. App-ka rasmiga ah ee BBC Somali ee ZenoMedia waxa uu ku siinayaa barnaamijyadii ugu dambeeyay iyo wararka ugu waaweyn. Waxaad barnaamijyada raadiyaha ku dhegeysan kartaa adigoo isticmaalaya daaraha codka ee bilaashka ah ama adigoo isticmaalaya wicidda teleefoonka Qiimaha dal walba u yaal ayaa laga qaadayaa wicitaanka teleefonka.
App-ka rasmiga ah ee BBC Somali ee ZenoMedia waxa uu ku siinayaa barnaamijyadii ugu dambeeyay iyo wararka ugu waaweyn. Waxaad barnaamijyada raadiyaha ku dhegeysan kartaa adigoo isticmaalaya daaraha codka ee bilaashka ah ama adigoo isticmaalaya wicidda teleefoonka Qiimaha dal walba u yaal ayaa laga qaadayaa wicitaanka teleefonka. Fadlan ka hubi shirkadaada inta aadan wicin - Ka akhriso wararka ugu waaweyn uguna dambeeyay bogga BBC Somali - Ku dhegeyso barnaamijyada aad ugu jeceshahay idaacadda daaraha codka ee bilaashka ah, ama adeegga wicidda teleefoonka. Qaab gaar ah oo lagu aqoonsan karo aaladda ayaa lagu kaydinayaa, laguna wadaagayaa , hawshaas oo ay qabanayso shirkadda Zeno Media LLC, taas oo iidhehyada u sahlaysa in laga dhex helo adeeggan. Xog kale oo kuu gaar ah sida magacaaga ama email-kaaga lama keydinayo. Kuwan waxaad ka beddeli kartaa Settings notifications.
Israel ayaa maanta sheegtay inay ilaa bar dhimeyso shidaalka ay siiso shirkadda kaliya ee korontada u qeybisa magaalada Gaza, ayada oo ka jawaabeysa gantaallo ay sheegtay in looga soo tuuray magaaladaas. Madaxweyne Donald Trump ayaa Isniinta maanta ah sheegay in wada-xaajoodayaasha ganacsi ee Mareykanka iyo Shiinaha ay dhowaan dib u billaabi doonaan wada-hadalladooda, taasi oo uu ku qeexay tallaabo horey loogu qadaay dhameynta dagaalka ganacsi ee ka dhexeeya labada dal. Wadahadalladaan oo soo maray sagaal wareeg, ayaa waxaa Mareykanka u matalaya diblamaasiga ku dhashay dalka Afghanstan balse heysta dhalashada Mareykanka ee Zalmay Khalilzad. Israel ayaa fulisay ugu yaraan hal weerar oo ka dhan ah bakhaar hub oo ku yaalla dalka Iraq, waxaa sidaas weriyey wargeyska The New York Times. Militariga Israel ayaa sheegay in ciidamadooda ay xalay duqeeyeen bartilmaameedyo ay kooxda Xamas ku leedahay Gaza, ayaga oo ka aargudanaya gantaallo ay kooxdaas kusoo ridday. Khasaaraha dhimashada weerarkii kooxda Daacish ay ku qaadday xaflad aroos oo sabtidii ka dhaceysay magaalada Kabul ee dalka Afghanistan ayaa gaartay 80 qof, sida ay maanta sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda.
Caawa Iyo Caalamka. 21/08/ Wararkii ugu dambeeyay ee fiidnimada iyo kuwii ugu muhiimsan dunida iyo Soomaalida.
WARARKA TELEFISHINKA BBC SOMALI TV 23.08.2019
bordi o bag fai da te
This entry was posted in 2017 by Alexandra W.. Bookmark the permalink.
5 thoughts on “Bbc somali wararka caawa”
Guingonapmi on 05.12.2018 at 18:42 said:
Dagaalyahannada Kurdiyiinta woqooyiga Suuriya ayaa shaaciyey in ay ciidamadoodii, saanaddii cuslays kala soo baxeen fadhiisimo ay ku lahaayeen goobo ku yaal xadka Turkiga, sidoo kalena ay baabiiyeen dhufaysyadii ay ku lahaayeen goobaha ay ka baxeen.
Fanchon N. on 28.11.2018 at 18:23 said:
Parti intime delle donne in mostra selfie le cose cambiano casting
Merlin C. on 07.12.2018 at 06:57 said:
Waxaad barnaamijyada raadiyaha ku dhegeysan kartaa adigoo isticmaalaya daaraha codka ee bilaashka ah ama adigoo isticmaalaya wicidda teleefoonka Qiimaha dal walba u yaal ayaa laga qaadayaa wicitaanka teleefonka.
Botewoodcra on 04.12.2018 at 20:14 said:
Raul O. on 29.11.2018 at 06:57 said:
Lion la strada verso casa altadefinizione lettera per mia sorella più piccola